‘एलजीप्रति उपभोक्ताको विश्वास धेरै छ’
‘एलजीप्रति उपभोक्ताको विश्वास धेरै छ’ पुरुषाेत्तम भण्डारी -सहायक महाप्रवन्धक, एलजी ब्राण्ड
जनतापाटी बुधबार, वैशाख ८, २०७८ मा प्रकाशित
देशको पुरानो र ठूलो ब्यापारिक घराना चौधरी ग्रुपले ३७ वर्षदेखि कोरियाबाट एलजी ब्राण्डका विभिन्न घरायसी सामान आयात गरेर नेपाली उपभोक्तामाझ पु-याइरहेको छ । पूर्वमा ताप्लेजुङ देखि पश्चिममा दार्चुलासम्म पाँच सयभन्दा बढी डिलरहरुबाट यी सामान विक्री वितरण हुँदै आएको छ । चौधरी ग्रुपमा विगत लामो समयदेखि काम गर्दै आएका छनु, पुरुषोत्तम भण्डारी । प्रस्तुत छ– एलजी ब्राण्डको गुणस्तर र यसका सेवा सुविधाका बारेमा सहायक महाप्रवन्धक भण्डारीसँगको कुराकानीः
उपभोक्ताले बुझ्ने भाषामा भनिदिनोस् न एलजी ब्राण्ड के हो र यसले कस्तो प्रकारको सामान उत्पादन गर्छ ?
– एलजी ब्राण्ड एउटा बहुराष्ट्रिय कम्पनी हो । यसका सामान कोरियामा उत्पादन हुन्छन् । विश्वका २ सयभन्दा बढी राष्ट्रमा एलजीका सामान विक्री वितरण गरिन्छ । एलजीको नेपालका लागि आधिकारिक विक्रेता चौधरी ग्रुप हो । एलजीको सामान विक्री वितरण सुरु भएको करिब ३६/३७ वर्ष भैसकेको छ । एलजीले सुरुमा टेलिभिजन उत्पादन गरेको हो । पछि अरु सामानहरु पनि उत्पादन गर्न थाल्यो । एलजीका जे सामान उत्पादन हुन्छन्, हामी ग्राहकका माझ ल्याउँछौ । एलजी नेपालीहरुले एकदमै रुचाईएको ब्राण्ड हो । एलजी भनेको त्यस्तो ब्राण्ड हो, जसले मानिसको जीवनशैली कसरी सरल र सहज तरिकाले अघि बढ्छ भनी अध्ययन गरेर सामानहरु उत्पादन गर्ने गर्दछ । त्यसले गर्दा उपभोक्ताको जीवनशैली सरल राख्न मदत पुग्छ ।
प्रोडक्टहरुमा हामीसँग एलजीको वासिङ मेसिन छ । नेपालमा यो मेसिन ६० प्रतिशत भन्दा बढी सेफ हो । यसमा जडित स्मार्ट थिनक्यु भन्ने फिचरले लुगा धुने काम गर्दा वाईफाई इन सिंक गर्न मिल्छ । जसले गर्दा आजको जस्तो व्यस्त जिवनशैली हुनेहरुका लागि सहज हुने गर्दछ । जसलाई फुर्सद छ त्यसले हातले लुगा धुन सक्छ । तर, व्यस्त जिवनशैली हुनेहरुका लागि यो धेरै उपयोगी हुन्छ । वाईफाईको कारणले हामी यहाँ गफ गरिरहेका छौँ तर, घरमा वासिङ मेसिनले लुगा धोइरहन सक्छौँ । म यहाँ अफिसमा बसेर वाईफाईमार्फत घरमा लुगा धुन सक्छु । त्यो टाइपको फिचर्स प्रयोग गर्दा मानिसको जीवनशैली सहज भयो ।
त्यस्तै वासिङ मेसिनमै अर्को फिचर्सहरु ल्याइएकोछ । कोरोना भाइरस महामारी कालमा मानिसहरु भौतिक रुपमा बाहिर आउन त्रसित भएका थिए । त्यसबेला विभिन्न फिचर्सहरु थपेर ल्याइयो । टु«स्टिम भन्ने एउटा फिचर्स थपिएको छ । जसले बाफबाटै लुगा धुने र लुगामा भएको किटाणुहरु मारेर हाइजिङ गर्दछ । त्यसले आम उपभोक्तालाई आकर्सित ग-यो ।
यस्तै , अर्को प्रोडक्टमा टिभी भयो । टिभी कोरोना कालमा हेर्ने बानी अलि बढ्दै गयो । टिभीमा पनि नयाँ फिचर्सहरु छन् । गुगल एसिटेन्ट, एमुल क्वारेजिङहरु यसका नयाँ फिचर्स हुन् । यो फिचर्समा टिभी चलाउने रिमोटबाटै गुगल खोल्ने, भ्वाइस कन्ट्रोल गर्न सकिन्छ ।
तपाईहरुका लक्षित उपभोक्ता चाहिँ को हुन् ?
– हाम्रा उपभोक्ता मध्यम र उच्च वर्गका हुन् । प्रोडक्ट रिचको कुरा गर्दा मानौँ, हामीसँग एउटा टिभीको क्याटोगोरी छ । यसमा हामीसँग ३२ इन्चको टिभीको मूल्य मोटामोटी ३०/३१ हजार रुपैयाँ पर्छ भने ८६ इन्चसम्मको अल्ट्रा एलइडी टिभीलाई १ लाख रुपैयाँसम्म पर्छ । हामीले उच्च वर्गका ग्राहकलाई पनि आकर्षण गरिरहेका छौँ भने ३१/३२ हजार खर्च गर्न सक्ने मध्यम वर्गका ग्राहकलाई पनि उम्कन दिएका छैनौँ ।
यस्तै, रेफ्रिजेरेटरको कुरा गर्दा हामीसँग सिंगल डोर, डबल डोर र साइड बार डोर गरी तीनवटा रेफ्रिजेरेटर छन् । रेफ्रिजेरेटरमा सागसब्जीलगायत तरकारी राख्दा १२/१५ दिनसम्म पनि बिग्रदैन । स्वाद र सफ्टनेसमा पनि कुनै परिवर्तन पाउनुहुन्न । त्यसैले यसलाई ग्राहकले धेरै मन पराए ।
वासिङ मेसिनको मूल्यचाहिँ किन नघटेको ?
–त्यसमा पनि हाम्रो ३४ वटा क्याटोगरी छन् । ट्विन वास भन्ने एउटा क्याटोगरी छ । त्यस्तै, फ्रन्ट लोडिङ, टप लोडिङ र ट्विन टब भन्ने क्याटोगरीका वासिङ मेसिन छन् । जसमा २४/२५ हजार देखि हामीसँग ४/५ लाख सम्मका वासिङ मेसिन छन् । त्यसैले सबै खाले आय भएकाका लागि यो सामान उपयुक्त छ ।
एलजीका प्रोडक्टको नेपाली बजारमा कति हिस्सा छ ?
–यहाँ हाम्रो बजार हिस्सा ३५/३६ प्रतिशत हो ।
सीजीले एलजीका सामान आयात गरेर एसेम्बलचाहिँ यही गर्छ हैन ?
– हामी पहिला टिभी भने एसेम्बल गथ्र्यौँ । तर, अहिले ट्याक्सेसनको पोलिसी छ । हाम्रो टिभी उत्पादन गर्ने फ्याक्ट्री लगभग बन्दको अवस्थामा पुगेको छ । एलजीको कोरियामा विभिन्न ठाउँमा फ्याक्ट्री हुन्छ । हामीले अर्डर पेश गर्छौैँ । हामीलाई सिंगापुरको अफिसले कन्ट्रोल गर्छ । त्यसपछि हामीलाई चाहिएको प्रोडक्टहरु भारत, भियतनामका फ्याक्ट्रीबाट सिधै आयात गर्छौँ र हामी बजारमा दिन्छौँ ।
बजारमा प्रतिस्पर्धा कस्तो छ ?
– बजारमा धेरै कम्पनी रहेकोले प्रतिस्पर्धा हुन्छ नै । तर, हामी धेरै टेक्नोलोजीमा ध्यान दिन्छौँ । हाम्रो जुन टेक्नोलोजी छ त्यसले ग्राहकलाई सिधै टच गर्छ । हाम्रो ब्राण्डका सामानले जिवनशैलीलाई सरल र सहज बनाउन सहयोग पुर्याउँछ । त्यसकारण पनि प्रतिस्पर्धाबाट हामी डराएर भाग्नु पर्ने अवस्था छैन ।
पुरानो व्यापारिक घराना चौधरी ग्रुपको बजारमा राम्रो प्रतिष्ठा छ । एलजीको पनि भिन्नै प्रतिष्ठा छ । त्यसकारण ग्राहकले हाम्रा सामानप्रति विश्वास गर्न झनै सहज भएको छ । हामीसँग ३५/३६ वर्ष लामो इतिहास छ ग्राहकहरुसँग घलुमिल भएको । हजुरबुबाले प्रयोग गरेको सामान अझै छ भने अहिलेको पुस्ताको ग्राहक झन्न् फ्रेण्ड्ली छन् ।
बिक्री पछिको सेवाको अवस्था चाँही कस्तो छ ?
–कुनै पनि इलेक्ट्रोनिक्स सामानको झन्झटिलो पक्ष भनेको बिक्री पछिको सेवा कसरी दिन सक्छ भन्ने हो । हाम्रो प्रोडक्टको बिक्रीपछिको सेवा देशभर पूर्वमा ताप्लेजुङदेखि पश्चिममा दार्चुलासम्म उपलब्ध छ । हामी कुनै पनि ठाउँमा समस्या परेको खण्डमा २४ घण्टाभित्र समाधान गर्न सक्छौँ ।
काठमाडौँको हेड अफिसबाट कन्ट्रोल हुन्छ । सातवटै प्रदेशमा शाखा कार्यालय छन् । त्यसमा हामीले नसके अरुबाट भएपनि समस्या समाधान गछौँ । कन्ट्रोलिङ भने टोल फ्रिको अफिस काठमाडौँबाटै हुन्छ । त्यहाँ हामीले कुनै समस्या आए वारेण्टी कार्डमा नम्बर दिएका छौँ । त्यसमा फोन आउने वित्तिकै २४ घण्टाभित्र समस्या समाधान हुनेछ । त्यसकारण ग्राहकले निर्धक्कका साथ प्रयोग गर्दा हुन्छ । वासिङ मेसिन, रेफ्रिजेरेटर, भ्याकुम क्लिनर लगायत अधिकांश सामानमा हामीले १० वर्षको वारेण्टी दिएका छौँ । टिभीमा भने २ वर्षको वारेण्टी हुन्छ । क्वालिटी र वारेण्टीविना हामीले सामान दिन नै सक्दैँनौ ।
उपभोक्ताले एलजीको सामान नै किन उपभोग गर्ने ?
– एलजीको यस्तो घरायसी सामानको ब्राण्ड हो, जसको प्रयोगबाट उपभोक्ताले आफ्नो जिवनशैली एक स्टेप माथि उठाउन सक्छन । त्यो नै मुख्य कुरा हो । आजको जमाना भनेको टेक्नोलोजीसँग सेट हुने हो । हाम्रो टेक्नोलोजीलाई अहिले विश्व बजारमै मन पराइएको छ । त्यो टेक्नोलोजीलाई ल्याएर हामीले ग्राहकमाझ लगेका छौँ । त्यसले उपभोक्ताको जिवनशैली एक स्टेप माथि उठाउँछ ।
करिब ३७ वर्षको एलजीको इतिहास छ । त्यसबेलाको फ्रिज अहिले पुरानै प्रविधिमा चलाउनेकी रिप्लेस हुन्छ ?
– त्यो त टेक्नोलोजी परिवर्तन हुँदै गएपछि हाम्रो पनि रिप्लेस गर्ने क्षमता छैन र सक्दैनौँ । त्यतिबेला नेपालमा फ्रिजको मार्केट नै थिएन । ब्ल्याक एण्ड ह्वाइटको टिभी बिक्री हुन्थ्यो । फ्रिजमा एक्सेल गर्ने अलिअलि कुरा हुन सक्छ । सिंगल डोरको डबल डोरमा कन्भर्ट हुनसक्छ । डबल डोरलाई साइड डोरसँगकोमा कन्भर्ट गर्न सकिन्छ । मोबाइल, टिभी भनेको चाँही टेक्नोलोजीसँग चेञ्ज हुँदै जान्छ । पुराना भएपछि ग्राहकले मन पराउँदैनन्, नयाँ टेक्नोलोजी खोजी हुन्छ ।
सामान ल्याउने क्रममा भन्सारमा कुनै समस्या छ ?
– त्यस्तो समस्या छैन । हामी जुन देशमा बसेका छौँ त्यसको मापदण्डमा रहेर सामान खरिद गर्छौँ । प्रक्रिया पु-याउँदा हामीलाई कुनै समस्या छैन ।
एलजी कम्पनीले कति रोजगार दिएको छ ?
– हाम्रा अरु ब्राण्ड पनि छन् । सिजी एलजीमा ६४३ जनालाई रोजगारी दिएको छ प्रत्यक्ष रुपले । अप्रत्यक्ष रुपले त्यो भन्दा बढी छ । नेपालभर यति जनालाई रोजगार दिएको छ भन्न मिल्दैन ।
कोरोनाकालमा कस्तो छ बजारको अवस्था ?
– कोरोनाले नेपालसहित विश्वलाई नै आक्रान्त पारेको छ । हामीले कोरोनाकालमा कोरोनासँगै हिड्ने अभ्यास ग-यौं । बजारमा अप्ठ्यारो त प-यो नै । तर, आत्तिहाल्नुुपर्ने अवस्था भने छैन । त्यसबेला हामीले विभिन्न संरचना अपनायौँ । उपभोक्तालाई हाईजन फ्रि उत्पादनहरुको बारेमा बतायौँ । लामो समय ताजा बनाएर राख्न सकिने फ्रिजका कारण दिनदिनै तरकारी किन्न जानु नपर्ने बनायौं । यसले कोरोना कालमा धेरैलाई सहज भयो ।
ठूलो टिभी किनिसके पछि ८/१० जनाले घरमा सिनेमा हलमा जस्तै रमाइलो गर्न सक्ने बनायौं । जसले गर्दा तपाईले बाहिर गएर रमाइलो गर्न पर्दैन । त्यो कुरा हामीले उपभोक्तालाई सिकायौँ । माइक्रो ओभनहरु ल्याएर रेष्टुरेन्टमा बन्ने परिकारहरु घरमै बनाएर खान सक्छौँ । यी हाम्रा लागि सबल पक्ष भए । जसले गर्दा उपभोक्तालाई बानी पर्यो । समग्रमा उपभोक्ताले हाम्रो उत्पादन प्रयोग गरिदिनु भयो ।
नयाँ वर्षको अवसरमा उपहार योजना पनि ल्याउनुभएको छ ?
– कन्जुमर स्किममा हामीले उपभोक्तालाई सस्तोमा सामान उपलब्ध गराउने उद्देश्य छ । जसमा ४०/४१ प्रतिशतसम्म मूल्य घटाएका छौँ । हाम्रो उदेश्य कुनै पनि उपभोक्ता हात खाली जानु नपरोस् भन्ने हो । हामीले ९ किलोग्राम भन्दा माथिको फ्रन्ट लोड वासिङ मेसिन किन्दा भेजिटेबल प्युरिफायार दिएका छौँ । जसमा हामीले फलफुलहरु १५ मिनेट अलिकति पानी राखेर खान लायक बनाउन सक्छौँ । अर्को वासिङ मेसिनहरुमा पानी तताउने कित्ली, टोस्टरहरु दिएका छौँ । डबल डोर फ्रिजमा स्ट्याण्ड फ्यानहरु दिएका छौँ । कुकिङ किटमा माइक्रो फोन दिएका छौँ । एसीमा फ्रि इन्सटलेसन दिएका छौँ । जो बाहिर सामान्यतया चार हजार पर्दछ ।
अन्त्यमा एलजी ब्राण्डको बारेमा थप केही भन्नुहुन्छ ?
मुख्य कुरा भनेको हामीले धेरै उपभोक्ताको माया पाउनु नै हो । अझै पनि नेपालमा नयाँ टेक्नोलोजी ल्याउँदै गर्छौ । अधिकांश कोरियामा बनेका टेक्नोलोजीहरु हामीले तीन महिनाभित्र नेपालमा ल्याउँछौँ ।
माओवादी केन्द्र प्रदेशस्तरीय कार्यकर्ता भेला जनकपुरमा, प्रचण्ड सहभागी २० मिनेट पहिले
फेवाताल मिच्नेहरु चैनले सुत्न पाउँदैनन् - देवकोटा ४७ मिनेट पहिले
अर्जेन्टिनाको मन्त्रिपरिषदमा फेरि फेरबदल ५६ मिनेट पहिले